Ogow: Ujeedada Wafdi ka socda Dalka Qadar oo tagay Dhuusamareeb (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Ogow: Ujeedada Wafdi ka socda Dalka Qadar oo tagay Dhuusamareeb (Sawirro)
Ogow: Ujeedada Wafdi ka socda Dalka Qadar oo tagay Dhuusamareeb (Sawirro)
July 13, 2019 admin532
Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ku qaabilay wafdi ka socda wasaaradda Gaashaandhigga dalka Qadar.
Kulanka Ra’iisul Wasaaraha iyo Saraakiisha Wasaaradda gaashaandhigga Qadar oo looga hadlay xoojinta taageerada Qatar ee dhismaha iyo qalabeynta ciidamada qalabka sida, ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirka amniga gudaha, wasiiru dowlaha Wasaaradda Gaashaadhigga, Taliyayaasha ciidamada Qalabka Sida.
Dowladda Qadar ayaa ka qeyb qaadaneysa dhismaha ciidamada Xoogga Dalka, gaar ahaan dhismaha xarumaha ciidamada ee ku yaalla Dhuusamareeb arrintaas oo qeyb ka ah barnaamijka taakuleynta ciidamada dowladda Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan bilowday Qaramaynta ciidamadii Ahlusunna Waljamaaca si ay qayb uga noqdaan ciidamada qaranka, looguna diyaariyo ka qayb qaadashada xoreynta deegaannada Galmudug ay uga sugantahay kooxda Alshabaab.
Faafaahin Qaraxii Maanta ka dhacay Dhuusamareeb